Etu ị ga - esi wuo ma sorochie Nkwalite ma ọ bụ Mgbasa Ozi Instagram | Martech Zone
Friday, April 17, 2015 Satọde, Febụwarị 4, 2017 Douglas Karr
Anyị na-akwado maka afọ nke abụọ anyị Egwú + Ememme Teknụzụ na Instagram bụ otu n'ime ebe anyị na-akwalite ihe omume ahụ. Ekwetaghị m na anyị na-arụ ọrụ dị mma na Instagram dị ka anyị nwere ike ịme, n'agbanyeghị, ya mere enwere m obi ụtọ ịhụ ndị folks na ShortStack bipụtara akwụkwọ ozi a ka esi ewu ma tụọ nzaghachi nke gị Nkwalite ma ọ bụ Mgbasa ozi nke Instagram.
Ọ bụ ezie na ụdị bidoro iji Instagram ihe ịma aka bụ na ụdị ejiri profaịlụ nke Instagram ha kwalite ọdịnaya dị iche iche, mana a na-enye ha otu njikọ dị ndụ iji rụọ ọrụ. Mmachi ahụ pụtara na ọtụtụ ụdị na-emelite URL na bio ha kwa oge - oge ụfọdụ kwa ụbọchị. Ihe omuma ihe omuma a na-enye azịza.
Site na ShortStack, ụdị nwere ike ịmepụta Mgbasa Ozi Instagram nke nwere ike ịnabata ụdị ọdịnaya niile gụnyere ụdị, vidiyo na ndị ọzọ. Kama iduzi ndị ọrụ Instagram gaa na URL nke na-arụ otu ọrụ, mee otu njikọ enyere gị aka na akụkọ ndụ gị nke Instagram gụọ n'ezie ike Instagram mkpọsa.
Mgbasa ozi ndị a nwere ọtụtụ uru - gụnyere mfe itinye njikọ nsuso, nsonaazụ nwere atụ, njikarịcha mkpanaka, usoro ihe omume, enweghị ndozi na ịdị mfe na onye na-ewu mkpọsa ShortStack.
Tags: instagram mkpọsankwalite instagram